Kaviri kukatyamadza kweCMA CGM mushure mekuputika kwechiteshi cheBeirut - teles
Kamwe kushamiswa kweCMA CGM mushure mekuputika kuchiteshi cheBeirut
By Chinde On Nyamavhuvhu 10, 2020
Zvivakwa zveRebhanoni zvemuridzi wengarava weFrance, iye muvambi wake Jacques Saadé akaberekerwa muBeirut muna 1937, uye izvo zvinopa makumi matatu muzana muzana yezvikamu zveReanese port, zvakakanganiswa zvakanyanya nekuputika uku.
Pakupera kwaChikunguru, Rodolphe Saadé, CEO wemuridzi wechikepe CMA-CGM aive muBeirut uye airatidzwa muLebanon zuva nezuva. Orient-Le Jour Manzwiro ake: “Ndakaona kuoma kwazvakaita zvinhu. Nyika iri kufamba zvishoma, kwete kutaura pakamira ”.
Aive kure nekufungidzira njodzi yaizorova mazuva mashoma gare gare, musi waNyamavhuvhu 4, chiteshi cheguta guru, chichiuraya vanopfuura zana negumi nemashanu, kukuvara zviuru zvishanu uye kuisa vanhu mazana matatu ezviuru mumigwagwa. Uye avo vane hutsinye mhedzisiro yakaoma kuongorora nhasi.
Icho chakakonzera kuputika uku mbiri maererano nezvinhu zvekutanga: kuputika kwechitakuri chematani anopfuura zviuru mazana maviri emazana emamoni nitrate akachengetwa muchitoro kubvira 2700. Asiiwa nevatengesi vengarava yeMoldova, iyi ngoro haina kumbobvira yasvika, kubvira, mahombekombe echiteshi chengarava cheBeira (Mozambique) kwaaifanira kunge akaendeswa, zvichienderana neshoko rekutanga rezviitiko.
Nekuti neChina Nyamavhuvhu 6, vatungamiriri vechiteshi veMozambiki vakaramba zviri pamutemo kuti vange vaziviswa nezvekusvika kwemutakura uyu panguva iyoyo. "Kusvika kwengarava kunoziviswa mazuva manomwe kusvika gumi neshanu pamberi," akadaro zviremera zveMozambiki.
Kukomba kweRebhanoni kwakanyanya kukuvara
“Kunyangwe chikepe chakange chaenda kuBeira, kwekupedzisira kwekutakura zvinhu kwaisava kweMozambique asi Zimbabwe kana Zambia, nekuti ammonium nitrate inoshandiswa kuita zvinoputika indasitiri yezvicherwa. Uye zvinoratidzika, mhando iyi yemamonium nitrate yakanga isiriyo inoshandiswa mune zvekurima (sefetiraiza) asi muindasitiri yezvicherwa, "akataura zvake asingazivikanwe akaudza mumwe mukuru wechikamu cheMozambic port kuAFP.
Kuputika kweBeirut: Kununura mukutsvaga anopona ...
Rebhanoni: Emmanuel Macron nzira yemugwagwa muBeirut ...
Kuputika kuchiteshi cheBeirut: mhedzisiro ...
Kana vari veboka reMarseille, rakatangwa naJacques Saadé (akafa muna 2018) muBeirut muna 1937, kushamisika kwechiitiko ichi kuchiri kuda. Kunyanya sezvo dzimbahwe remakambani emakambani, iro rinopa makumi matatu muzana evhoriyamu yechiteshi cheRebhanoni, iri mazana mashoma emamita kubva kunzvimbo yekuputika uye yakakuvadzwa zvakanyanya, kambani yakati mukuburitswa kwenhau.
Pakati pevashandi 261 vevashandi vengarava munyika, takadzora vaviri vakakuvara zvakanyanya, vazhinji vakakuvara zvishoma uye kufa kamwe, inotsanangura CMA CGM. Pashure penjodzi, kambani yakazivisa kumisikidzwa kwechikepe chayo kuTripoli (muRebhanoni, iro guta rechipiri 85 km kuchamhembe kweBeirut), ichisvika pachiteshi cheguta guru. , gedhi repakati pezvinhu, rakanga risingachashandi.
Iri boka rakabva kuCompagnie maritime d'amronnement (CMA, iyo yakawana CGM, yakavanzika muna1996) iyo yakatanga mitsetse yekutanga muMedithera, uye yakadzika midzi muAfrica nekutora kambani yekutumira Delmas kubva kuBolloré muna 2005. , feeds, kunyangwe nedambudziko remari munyika yeCedars, zvirongwa zvakakosha.
Yakabatanidzwa neayo mukwikwidzi uye dzimwe nguva Italian-Swiss mukwikwidzi MSC, yakanga yaisa munaJanuary kuwana kubvumidzwa kwechiteshi cheBeirut kurwisa Hong Kongers China Merchants uye Hutchinson uye Emirati Gulftainer. Pamwe chete, ivo vanomiririra 80% yemavhoriyamu ePort of Beirut. Asi CMA-CGM yakanga yakamirira kuumbwazve kwemaitiro maitiro, yakamiswa pakureba kwenhamo yehutano.
Iri boka rakanga rawedzera danda (kusvika 78%) mumudziyo wemugadziri muTripoli, uye rakanga ratanga kushanda muchivako munzvimbo yemahara yechiteshi cheBeirut mukupera kwaKurume, vachipedzesera kupihwa kweCeva Logistics, ichangobva kuwanikwa. , uye dzimba dzefiriji dzakarongedzwa kuti dziwedzere kugadzirwa kwekurima kweBekaa.
“Isu takagara tineRebhanoni. Isu tiripo kuti timutsigire, kuti timubatsire kubuda munhamo iyi. Ndokusaka tiri kuenderera mberi nemapurojekiti aripo uye kutanga zvitsva. Isu tinopfuurira kutora nekudyara. Kuburikidza nezvatakaita, tinoda kuendesa meseji yetariro uye kukurudzira vamwe veRebhanoni kuti vaite saizvozvo, "akadaro Rodolphe Saadé pakupera kwaJuly. Mashoko ayo nhau anopa runyararo rwakasimba.
kunobva: https: //www.jeuneafrique.com/1026200/economie/explosions-de-beyrouth-le-dambudziko-choc-pour-cma-cgm/
Kameroni: Bafia nenhaka yayo ine utsinye
Chii chatinoziva nezve kuputika kaviri kwechiteshi cheBeirut muRebhanoni?
Guillaume Soro anoita mushure mekurambwa kwesarudzo yake
MaNobels anovandudza sei kurwisa hurombo mu Africa
Mali: akadzingwa mutungamiri wenyika IBK abuda muchipatara